म समलिङ्गी हुँ - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
सोनीका रोकाया, युट्युबर
म समलिङ्गी हुँ
बाथरुममा समय बिताउन कत्तिको मन लाग्छ ?
मेरो लागि बाथरुम निकै महत्वपुर्ण छ । समय भयो भने घण्टौं बाथरुममै बिताइदिन्छु ।
कति समय बिताउनुहुन्छ ?
यो समय र परिस्थति हेरेर हुन्छ । कहिले १० मिनेटमा पनि निस्कन्छु । कहिले १ घण्टा पनि अपुग हुन्छ ।
त्यस क्रममा के–के गर्नुहुन्छ ?
ट्वाईलेटको कामबाहेक विभिन्न प्रकारका रोमान्टिक गीत सुन्दै समय बिताउँछु । एउटी युवती बाथरुममा पसेपछि आफुलाई निकै सेक्सी सम्झन्छे, म पनि त्यो फिल गरिहाल्छु । फुर्सद भयो र वाथरुममा धेरै समय विताउन पाए भने फिलिङ्स पनि अर्कै हुन्छ ।
तपाईं त समलिङ्गी हैन ?
हो, म समलिङ्गी हुँ । मलाई बाथरुम निकै हाईजेनिक लाग्छ । बाथरुममा के–के गर्न सकिन्छ सवै गर्छु । एउटा समलिङ्गीले आफूलाई कसरी सन्तुष्टि राख्छन् भन्ने कुराका लागि पोर्न मुभी हेर्नुस्, थाहा हुन्छ ।
बाथरुममा अरु मान्छे पनि आउने सम्भावना हुन्छ, कहिलेकाहीं अरु मान्छे कराएको अनुभव छ ?
समय र परिस्थिति हेरेर बाथरुममा समय विताउने हो । घण्टौंसम्म वाथरुममा बिताउन घरमा अरु कोही नभएको समय चाहिन्छ । सबै जना घरमा भएका बेला बाथरुममा इन्जोय हुँदैन् ।
प्रकाशित :कार्तिक ११, २०७५
यौन खेलौनाको प्रयोग
म पत्रकारिताको हिरो नै हुँ !
आमा बन्न नसक्ने हुँ कि ?
१८ पटक स्क्रिप्ट रि–राइट गर्ने निर्देशक मै हुँ
आर्यनको बचाउमा एडिटर उत्रिए चैत्र १०, २०७५
बालीमा प्रियंका र आयुष्मानको मस्ती चैत्र ३, २०७५
चम्कियो भाग्य चैत्र १, २०७५